CIN Khabar भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न पक्राउ !
भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न पक्राउ !
सीआईएन बुधबार, फागुन ५, २०७७, ०६:३४:००
काठमाडौं । बैतडीका किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न पक्राउ परेका छन । बलात्कार र हत्या आरोपमा प्रहरीले भागरथीकै सहपाठीलाई पक्राउ गरेको छ । घटनाको १३औँ दिन हिजो प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको र आरोपी युवाले बलात्कार हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
भागरथीको छिमेकीसमेत रहेका उनको विबरण भने आज मात्रै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले केहीबेरअगाडी सीआइएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरीका अनुसार सुरुमा भागरथीलाई सानो भीरबाट लडाइदिएको र घाइते अवस्थामा बलात्कार गरेको बयान दिएको छ ।
भागरथीको बलात्कारसमेत भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैदिन विद्यालयबाट फर्किँदा बाटोमा बलात्कार तथा हत्या गरेको उनले स्विकारेका गरेको आजै ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्ने सुदूरपश्चिम प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले पनि जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथी २१ माघमा विद्यालयबाट फर्किँदा सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । अर्को दिन स्थानीय लवलेक जंगलमा उहाँको शव भेटिएको थियो ।
‘छिमेकी दुई परिवारबीचमा पुरानो रिसइबी रहेको र त्यसैको बदला लिन छोरीलाई बलात्कार गरेको बयान आरोपीले दिएका छन । भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा स्थानीय विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा आरोपी पनि सहभागी हुँदै आएका थिए । ‘
घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदी १० दिनदेखि घटनास्थल बैतडीको दोगडाकेदार गाउँमै हुनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले भागरथीको परिवारलाई पाँच लाख राहत दिने हिजो घोषणा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७, ०६:३४:००